सूचना, विज्ञान र महाव्याधि « News of Nepal
सूचना, विज्ञान र महाव्याधि
यो भयाक्रान्त महामारीको युगमा, मानव अस्तित्वको प्राथमिक चुनौतीपछि सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको ज्ञान, यसका अवधारणा, संकल्प र विमर्शको हो । ज्ञान के लाई मान्ने ? कुन ज्ञानका कार्य आवश्यक वा अनुकरणीय छन् ?विज्ञानद्वारा उत्पन्न ज्ञानको सहायताले सूचना नभएको विषयमा समेत जानकारी राख्न मद्दत पु-याउँछ । तर कुन कुरालाई शुद्ध ज्ञान मान्ने ? र, कुनलाई आस्था वा विश्वासको दृष्टिकोणको रूपमा लिने भन्ने व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ । विज्ञान ज्ञान संरचनाको विधि हो, जसअन्तर्गत कुनै निर्णय वा निष्कर्षमा पुग्नुअघि वस्तुगत विश्लेषण र तथ्यांक मूल्यांकन अपरिहार्य हुन्छ ।
विज्ञान कुनै स्थापित कथ्यलाई सत्य मान्दैन । किनकि त्यो एक व्यक्तिगत अनुभवमा आधारित छ । विज्ञानमा ज्ञान एकमात्र तार्किक तथ्य हो, जुन आगमन र निगमितको हुनुलाई पूरा गर्दछ । विज्ञानको ज्ञान यसको पुनरावृत्ति र संक्षिप्तताबाट यसको वैधता प्राप्त गर्दछ । यसको प्रभावकारिताको प्रमाण उद्देश्य र तथ्यात्मक मूल्यांकनबाट लिइएको हो, यसले हामीलाई यो छनोट र कार्यमा मद्दत गर्दछ ।विज्ञानद्वारा उत्पन्न ज्ञानको मुख्य विशेषता यसको सार्वभौमिकता हो तर एकै समयमा यो ज्ञान अनन्तको रूपमा दाबी गर्दैन । यसको खासियत भनेको यो हो कि यसलाई निरन्तर प्रयोगात्मक अवलोकन र अनुभवको आधारमा परिवर्तन गर्न अनुमति दिँदैन । यसले सबै प्रयोगहरू र सिद्धान्तहरूलाई स्वागत गर्दछ, जसले सरल र स्पष्ट समाधानहरू प्रस्तुत गर्दछ । यस मुक्तिले यसलाई स्थिर हुन दिँदैन र यसलाई नयाँपनले भर्दै परिवर्तन गर्दछ ।
ज्ञान निर्माणको यस विधिको साथ, मानव समाजले आधारभूत रूपमा सिक्नुपर्छ कि कुनै ज्ञान अन्तिम छैन । प्रत्येक ज्ञान परीक्षण मात्र मान्य छ र एकै साथ सबैभन्दा शक्तिशाली शिक्षा यो हो कि सबै मानिसहरु ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन् र शंका निश्चित कर्म होइन । प्रश्नको मानसिकता र जिज्ञासाले मानिसमा मैन्युलिटीको भावना ल्याउँछ, विज्ञानद्वारा उत्पन्न ज्ञानले हामीलाई सत्य, असत्य, वास्तविकता, तर्क, विश्वास र छलकपटको बीच भिन्नता सिकाउँछ ।
विज्ञानले हामीलाई सजग हुन र प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिन मात्र शक्ति दिन्छ । यसले हामीलाई स्वतन्त्र, शोषणको समानतावादी समाजको मार्ग देखाउँछ । यो विज्ञान हो कि तिनीहरूलाई मानिसबीच कुनै भेदभावविना मात्र जीवित प्राणीहरूको रूपमा मान्दछ । यो भिन्नताले धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग, भाषा, राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक र सांस्कृतिक भिन्नताबाट पारिएका एकमात्र मानिस हुन प्रेरणा दिन्छ । विज्ञानले एक फरक भाषिक प्रवचन पनि बुनाइ गर्दछ, जसमा पानी, फरक पानी, नील, अब, उनीहरूको सामाजिक भिन्नताहरूको बाबजुद ‘एचटीयुओ’ मानिन्छ । समानता र समानताको एकताबाहेक अस्पृश्यता, रंगभेद, यौनवाद वा मलेरिया, कालो बजार वा कोरोना, सबै वस्तुनिष्ठ उद्देश्यका साथ सामना गर्न अपरिहार्य साहस प्रदान गर्दछ ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल के हो भने, सत्तरी वर्षमा शिक्षादायी प्रयास र असम्मानजनक साक्षरताको दर प्राप्त गर्दा पनि शिक्षाका सन्दर्भमा मौलिक अधिकारको हिस्सा बन्न एक दशकपछि पनि यो दृष्टिकोण जनमानसमा विलुप्त छ ।यसको अनुसन्धान गर्न, हामीले विज्ञान पाठ्यक्रम, शिक्षण–शिक्षा र मूल्यांकन विधिहरू छलफल गर्नुपर्नेछ । साथै यो पनि हेर्नुपर्दछ कि अन्य विषयहरू जस्तै– साहित्य, कला, गणित, सामाजिक अध्ययन इत्यादिले यस वैज्ञानिक दृष्टिकोणको निर्माणमा बाधा पु-याउँदैन र जहाँ हामी विज्ञान शिक्षकहरूको निर्माण प्रक्रियामा हराइरहेका छौं ।स्कुल वा शिक्षण–अध्ययनले विद्यार्थीहरूमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न गर्न सक्छ कि भन्ने प्रश्नको उत्तर तीन चरणमा देख्न सकिन्छ । पहिलो यो हो कि विज्ञानलाई प्राथमिक तहमा कसरी बुझाइन्छ वा सिकाइन्छ । दोस्रो, कसरी विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा र सिकाइको आउँदो क्रममा विज्ञानमा संलग्न हुने आशा गरिन्छ । र, तेस्रो कसरी अन्य विषयहरूको प्रयोग र प्रयास अनि उनीहरूको सिकाउने दृष्टिकोणले वैज्ञानिक दृष्टिकोण र मानसिकतालाई आकार दिन्छ । प्राथमिक तहमा, भारतीय ज्ञान प्रणाली वा स्कुल प्रणालीले सिकारुलाई विश्वास गर्दैन कि ऊ आफैंको कुनै पनि ज्ञान हुन सक्छ । धेरैजसो शिक्षा उपक्रमहरू र प्रक्रियाहरू शिक्षामूलक हुन्छन्, जसले विषयको रोटेन शिक्षालाई बढावा दिन्छ । यस विधिमा अवलोकन र विश्लेषणको कुनै ठाउँ छैन ।
हामीले हाम्रो शैक्षिक ढाँचामा ‘समस्या समाधान’का विधिहरू समावेश गर्न बाँकी छ । विज्ञानको एक विषयको रूपमा परिचय र वैज्ञानिक दृष्टिकअप्रत्याशितरूपमा विज्ञानको इतिहासबाट सिक्न बाँकी छ, जसमा खोज र अन्वेषकको सटिक मेल, महान् वैज्ञानिकहरूको जीवनी, कुन वर्षको प्रमुख आविष्कारहरू र पृथ्वी गोलाकार छ, यो कोपर्निकसले भने आदि रोटेद्वारा गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा, विद्यार्थीहरूलाई ‘प्रयोगशाला’मा लगिन्छ, जसको आधारमा विज्ञान जटिल विषय मात्र प्रयोगशालामा सिक्न सकिन्छ । अब विज्ञान र यसको अंग्रेजीमा प्रवीणता पनि स्थापित भएको छ ।विज्ञान–शिक्षण र पाठ्यक्रम ‘ज्ञान–निर्माण’ को विधिहरूमा, यो हामी दैनिक जीवन र विज्ञानको मेलमिलाप बुझ्न सक्ने अपेक्षाभन्दा बाहिर छ । सामान्य विज्ञानको अभ्यासमा, हामी आशा गर्दछौं कि चमत्कारपूर्णरूपमा कक्षाकोठामा एक ‘वैज्ञानिक क्रान्ति’ हुनेछ । विज्ञान शिक्षामा पूर्वाधार र प्रयोगशालाहरूको अभावलाई बेवास्ता गरिन्छ वा विज्ञान विज्ञानको लागि यो अपरिहार्य मानिन्छ । मानव ‘जिज्ञासु’ प्रवृत्तिबाट जन्मेको हुन्छ । बच्चाजस्तो स्वभाव यसको संकेत हो । ऊ जान्न चाहन्छ कि चराहरू कसरी उडान गर्दछन्, किन फूलहरू फुल्छन्, कसरी पृथ्वी गोलो हुन्छ आदि । तर यी सबै प्रश्नहरू सिलेबस र मूल्याङ्कनभन्दा बाहिरका छन् । तिनीहरूलाई चिन्नु ‘व्यर्थ’ हो ।
त्यसो भए डर पनि छ कि यदि विद्यार्थीलाई आज त्यस्ता प्रश्नहरू सोध्ने अनुमति दिइयो भने भविष्यमा उसले जटिल सामाजिक–राजनीतिक प्रश्न खडा गर्नेछ र यस क्रममा यथास्थितिलाई चुनौती दिनेछ ।राज्य, सरकार र समाजले यसलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणका लागि आफ्नो चिन्ता बनाउनुपर्छ । दाभोलकर, कलबुर्गी र होशंगावाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रमजस्ता चिन्ताहरूलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेछ । साथै विज्ञानको शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । महामारीको यस युगमा हामी नियमितरूपमा केही ‘चमत्कार’ हुने आशा गर्दै छौं, तर यो चमत्कार केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट मानव जीवन जोगाउन सकिन्छ । यो समयलाई जितेर परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
– एलबी विश्वकर्मा, काठमाडौं ।